AMISOM: 30 ganacsato qaad ah ayaan ka badbaadinay Alshabaab afduubtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Ciidamada Midowga Africa ee Soomaaliya Jooga ayaa sheegay in iyaga iyo ciidamada maamulka KMG ah ee Juba ay xoog ku badbaadiyeen ilaa 30 ruuxu oo ah ganacsato qaado, kuwaasoo Alshabaab ka afduubteen Kismaayo.
Egyaga Midowga Afirka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Maxamed Saalax Annadif ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ciidamada AMISOM iyo ciidamada maamulka KMG ee Jubba ay ku guuleysteen badbaadinta 30 ruux oo isugu jiray rag iyo dumar xalay maqribkii.
“Maqribnimadii xalay ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka KMG ee Jubba ayaa badbaadiyay 30 ruux oo Alshabaab ay afduubteen”sidaasi ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wakiilka midowga Africa ee AMISOM.
Maxamed Saalax Annadif ayaa sheegay inay u mahad celinayaan ciidamada AMISOM iyo ciidamadii soo badbaadiyay haweenkii laga afduubtay magaalada Kismaayo isagoo sheegay inay sii wadayaanb caawinta shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan si adag u cambaareynayaa falkan afduubka ah oo ah mid lagu cabsi-gelinayo shacabka Soomaaliyeed, kana horimaanaya xorriyadda iyo fursadaha ay ku shaqeystaan. Waxaana rajeynayaa in falalka argagaxisada loo jabin doono sidii maanta loo jabiyay oo kale,” ayuu hadalkiisa ku daray dajire Anaadiif.
Dadkan ayay AMISOM ku sheegtay inay isugu jireen rag iyo ka ganacsada qaadka, waxana laga qafaashay deegaanka Baar-caleen oo u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo magaalada Kismaayo.
War-saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in Al-shabaab ay dadkan la aaday dhinaca degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, balse ay ciidamadooda iyo kuwa dowladdu howlgallo ay sameeyeen kusoo furteen ganacsatadaas.
Ugu dambeyn, waxaa lagu sheegay warka kasoo baxay AMISOM in markii ay wayday lacagihii ay ka heli jireen Kismaayo, Marko iyo deegaanadii kale ee ay ka talin jireen ay billaabeen inay falalka noocaan oo kale ah sameeyaan si ay lacago ugu helaan.
Alshabaab kama hadlin warka kazoo baxay Alshabaab ee ah in laga badbaadiyey ilaa 30 ganacsato qaad ah, hase ahaatee Alshabaab ayaa xilli hore mamnuucay qaadka, waxeyna gubaan gaadiidka qaadka sida marka ay gacanta ku dhigaan.